Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » USA Travel News » Akanjo tsara tsy manan-kialofana any Waikiki izao mangataka vola amin'ny mpizahatany
Na dia manana trano fandraisam-bahiny aza ireo trano fandraisam-bahiny sy trano fandraisam-bahiny any Waikiki ary ireo mpizahatany avy any Shina dia fantatra ho mpandany vola be indrindra, ny tombom-barotra dia tsy miova amin'ny fahafahan'ny State of Hawaii hikarakara ireo mponina tsy manan-kialofana ao aminy.
Ny vahaolana dia matetika no mahita antony hanenjehana ireo fianakaviana tsy manan-kialofana isaky ny valan-javaboary iray hafa. Vao herintaona lasa izay, ny sisin-dàlana amoron-dranomasina Kalakaua Avenue ao Waikiki dia nivadika ho faritra fitobiana ho an'ireo tsy manan-kialofana natory teo am-baravaran'ny hotely kintana dimy izay nandanian'ireo mpizahatany $ 500.00 isan'alina.
Amin'ny fanenjehana ireo tsy manan-kialofana, fampiharana lalàna sy torapasika akaiky amin'ny alina, dia tsy dia tazana intsony ireo tsy manan-kialofana ankehitriny. Nanjavona ve izy ireo? Tsy dia izany loatra.
Matetika ny olona tsy manan-kialofana dia tazana mangataka vola eo anoloan'ny hotely fisakafoanana na trano fisakafoanana. Ny olona tsy manan-kialofana izao dia miseho akanjo tsara ary matetika dia toa mpizahatany miandry taxi. Valizy mahafinaritra no nanolo ny sarety fiantsenana harona plastika.
Mbola mipetraka ny fanontaniana: Iza no mandoa ny valizy sy ny akanjo madio?
Mandra-pahoviana ny trano fandraisam-bahiny hanova ny andraikiny hanampy ireo tsy manan-kialofana any amin'ny Fanjakan'i Hawaii na amin'ireo fikambanana mpanao asa soa fa tsy mahatsapa fihenan'ny trano?
Angamba noho ny fanazavana ny lalàna momba ny fanangonana hetra mandalo mandritra ny fotoana fohy amin'ny saram-pialan-tsasatra tsy maintsy atao, dia misy safidy maromaro hafa hikarakarana an'ity sehatra mampalahelo an'ny Hawaii ity. Fandresena fandresena ho fanampiana ireo olona sahirana ireo ary azo antoka ho an'izay mpizahatany mahatsapa izany Aloha rehefa mody izy ireo.
Tsy ampy taona ny isan-jaton'ny tsy manan-kialofana ao Hawaii. Andiana tanora tsy manan-kialofana tsy manan-kialofana namono mpizahatany tany Waik taona lasa.